Any Frantsa : fampirantiana ny mozika malagasy | NewsMada
Any Frantsa : fampirantiana ny mozika malagasy
Mbola mitety faritra maro, any ivelany any, ilay fampirantiana mitondra ny lohateny hoe « Madagasikara sur le chemin de la musique », raha toa ka ny volana jolay 2014 no efa nandalo tetsy amin’ny Institut français de Madagascar (IFM) etsy Analakely. Hita ao amin’ny Espace Sainte-Anne, any Lannion Frantsa, ny fampirantiana hatramin’ny 11 febroary.
Fampirantiana sary arahina fandefasana horonantsary, samy an’ilay mpanakanto Erwan Larzul, izy ity. Ny mampiavaka azy ? Nentiny indrindra hanomezam-boninahitra ny mozika malagasy, izay tena nambabo ny fony, ireo. Fomba iray hanokafam-baravarana ny mozika sy ny kolontsaina malagasy amin’izao tontolo izao ihany koa io.
Resy lahatra i Erwan Larzul, tamin’ny fijanonany teto amintsika, fa manan-talenta ny Malagasy, saingy na ny samy Malagasy aza, vitsy no mahalala ireo mpanakanto ireo. Fomba iray hampahafantarana azy ireo ity fampirantiana ity. Hita ao anatin’izany, ohatra, ireo mpitendry zavamaneno tena malagasy, izany hoe, tsy fahita any amin’ny firenen-kafa, toy ny valiha, sy ny zavamaneno hafa, toy ny angorodao.
Arahim-panazavana ny sary. Manome aina sy manamafy ny fampahafantarana ny mozika avy amin’ny lafy valon’ny Nosy kosa ny feo sy ny horonantsary. Marihina fa, ankoatra ny maha mpakasary matihanina an’i Erwan Larzul, mpandraharaha eo amin’ny sehatry ny mozika koa izy : mpikarakara « festivals » sy fampisehoana, mpamokatra rakitsary, sns.